5 zvinhu zvaunofanira kuziva pamusoro peCisco CCNA Certification | ITS
5 zvinhu zvaunofanira kuziva pamusoro peCisco CCNA Certification
Chii chinonzi CCNA Certification?
Ndeapi mhando dzemashoko ari chikamu cheCisco CCNA Certification?
Ndeipi mari yekutora Cisco CCNA Certification kuongorora?
Ndekupi kwandingazokwanisa kuwana mahwendefa eCNANA mazano ekudzidza?
Nzira yekugadzirisa sei CCNA Certification kuongorora?
Nguva uye basa rakashingaira rinowanikwa mukuwana chiremba chechikoro chinoguma chave chakanaka kwenguva refu. Cisco CCNA Certification iyo imwe purogiramu iyo inogona kubatsira kusimbisa unyanzvi hwemunhu mune imwe ndima uye inokonzera rutsigiro rwekuita kune imwe nhamba inotevera.
CCNA inorodzwa seCisco Certified Network Associate, chirongwa chekuzvipa-spellbinding. Panguva iyo munhu akawana zvakakodzera chikwata ichi, vanoonekwa sevanokwanisa kuhurongwa hwehutano uye humwe hunoenderana.
Chirongwa chekuongorora chinotarirwa uye chinopiwa nevakawanda veIt firm firm Cisco. Kufunga nezvenzira iyo inoshandiswa mumakambani ose inoda kurongeka urongwa, hutachiwana hwawana huwandu hwakawanda pakati pevashandi veI IT uye inomira pakati pezvinonyanyozivikanwa zvirongwa zvechirongwa nguva dzose.
Kunyange zvazvo chirongwa ichi chave chiripo kwemakore mashoma ikozvino, sangano Cisco riri shure kwechirongwa chirongwa ichi rinoramba richikudziridza uye kuchinja zvidzidzo nechinangwa chavanonyatsosarudza kuchinja kushandiswa kwemabhizimisi.
Kugadziriswa kunoshamisa kwakaitwa mugore re2013 pavakagadzira matanho akasiyana-siyana emabasa okuita kuti vashandi vave neunyanzvi mune imwe nzvimbo. Nhamba ye 9 yakasiyana-siyana yeCACNA themesiti inowanikwa zvino uye iwe unogona kusarudza nyaya yakakodzera yakatarwa nekuda kwezvinangwa zvako munguva yemberi.
CCNA Cloud - Nyaya iyi yakanyatsotarisa pamusoro pekufambira mberi kwegore, kuchengetedza uye Cisco gore urongwa. Negore rekugadzirwa kusvika pakuonekwa zvakajeka, izvi zvinotaridzirwa senzira inokosha nevakawanda vanoedza kuedza.
CCNA Collaboration - Vashandi vanoshanda mukukurukurirana kweP, kuronga masimi kunogona kusarudza Collaboration iyo inosvika kure yakadzika inoisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinowanikwa nezwi, data, video uye zvinyorwa zvinoshandiswa.
CCNA Cyber ​​Ops - Icho chiziviso kana chapera chinoratidza unyanzvi uyo ari cyber kuchengetedza tenzi akagadzirirwa kutarisa kuchengeteka kwakakwirira kwesangano.
CCNA Data Center - Misoro yakanyatsogadziriswa mumuedzo uyu unosanganisira kuvaka chikwata chemashoko, kuronga sarudzo, dhepfenyuro yekushandisa, kuchengeta gear uye hardware.
CCNA Industrial - Chirongwa chinoita kuti munhu anzwisise maitiro ekugadzirisa uye kushanda kunodiwa kuti zvibudirire kushandiswa kwenheyo dzinosanganisira mafuta, gesi, magetsi uye kuungana.
CCNA Routing uye Kuchinja - Icho chinonyanya kukoshesa kuti Cisco inonyanya kukoshesa-ndeye kunyanya kukosha kubvumirwa kwezvinhu zvose zvinovaka uye ihwo hutano hwepamusoro chero unyanzvi hwehutori hunogona kutora.
CCNA Security - Munhu uyo ​​anopedzisa purogiramu iyi anotsigirwa kuti ave nehuwandu hwekudzivirira kuchengetedza data, achicherechedza kugona kwayo, kugoverana uye anogona kubatsira kusungirirwa yakachengetedzwa zvakakosha yezvigadzirwa zvemabhizimisi.
CCNA Service Provider - Dzidzo yakapedzwa nevanhu vanoshanda kuti vanyengetere sevashandi vehurongwa kubatsira masangano sebasa. Kuti apedzise hurukuro, dzinoda maitiro akajeka uye kushanduka kwakasimba mumagariro ezvino muhurongwa hwekutonga.
CCNA Wireless - Zvose zvisina utachiona zvekutengesa hutsva hunoenderana nehutano hunosimbiswa kana unyanzvi apedza muedzo uyu zvakanaka. Ivo vari kutarisira kuronga, kucherechedza chimiro chechiratidzo nekugadzirisa kusachengetedzwa kusina utsi.
Chimwe nechimwe cheCCNA Certification test chinofanira kuongororwa chete. Cisco inogadzirisa CCNA kuongorora mari ye $ 295 pakuongorora. Uku kuenzanisa kunogona kuchinja zvichienderana neruwa rwamunogara, shanduko yemitengo uye zvakasiyana-siyana. Icho chakanaka kutarisa nzvimbo yepamutemo usati wanyorera kuongorora.
Kuziva pachena CCNA yekuongorora mazano pamusoro pewebhu haisi sezvinetso sezvaungave wakambofunga. Pane zvinhu zvishomanana uye vashandi vanoita basa rekuedza vanogona kupa zvose zvekutungamira zvakasununguka pasina mari.
Kunyange zvazvo mamwe maerekero aya anowanikwa paIndaneti sekukwanisa kubudiswa, on YouTube uye kuburikidza nechiremera chinotungamira nzvimbo, iwe unogonawo kubvumirana kubvuma mapurogiramu anoenzaniswa anopiwa nemasangano. Kubvumirana kugamuchira zvidzidzo zvakadaro kunobatsira kuwana nguva ichangopfuura CCNA yekuongorora mazano sezvakakosha pasina chekushandisa mari uye rubatsiro rwezvemhizha kune vadzidzisi vakanyatsogadzirisa kuongorora kweCisco.
Usati watora muedzo, zvakakosha kuona kuti hapana chikonzero chekudzidzira kutora chiyero chetariro. Kunyange zvakadaro, the CCNA Routing uye Kuchinja ndicho chikonzero cheumwe neumwe kuongorora. Inotaridzika seyakanyanya kudzvinyirira uye ichakugonesa kubvisa miedzo yakaoma.
Nezvipfumbamwe zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana zvekutarisa pamusoro, zvinetso zvekuchenesa muongorori zvinotarisa kuti unoziva zvakadini iwe munharaunda.
CCNA mirayiridzo yekudzidzisa uye modules inokosha kuti inzwisise syllabus zviri nani usati waedza kuedza
Zvechokwadi, kunyange nyanzvi yeTI iyo ine nguva yakareba kwazvo yekubatanidzwa mumunda inofanirwa kufunga nezvekushandisa mazano uye kunzwisisa chirongwa chekubvunza. Ichaita kuti munhu akwanise kuita zvakakosha pakuedza.
Tora vazhinji vanoita miedzo, ndiyo nzira inonyatsorongedzwa. Inobatsira kukurudzira mano ako, kubudisa mhinduro nokukurumidza uye ichakuisa iwe kuti utore mugumo wegore rekuedzwa usinganzwisisiki.
Chiyero chinotungamirirwa kune chiyero che 1000 chinounza izvo iwe unofanira kukora 825 kuti uwane.
Pasina zvishoma, maminitsi e30 anofanirwa kushandiswa zuva rimwe nerimwe kuti ashandise mabhuku sekudzidza kutengesa ndeyekutanga kuwana CCNA certification. Pachinhu chakanaka chokuti iwe uwane chero chezvinhu zvinotambudza, funga kuisa mari yakawanda kana kubatanidzwa nekugadzirira kuvakira. Tsvaga zviyero zvisina kuwanikwa pawebhu uye uzviidze ivo vhiki nevhiki.
Kusiyana nehumwe humwe hutano hwezvigadzirisiti, CCNA neCisco inoonekwa seine zvinetso pamusana pokuti inoda kuti munhu ave mazhinji pasi pano uyewo ruzivo rwekufungidzira mundima yavo yekunyengera. Chero mamiriro ezvinhu, kana iwe ukazvipira iwe kuti unzwisise pfungwa uye utore mushure mekudzidzira kudzidza zvakagadzirwa, zviri nyore kwazvo kupindura mibvunzo muchiedza chechokwadi.
Mukuwedzera, masangano chaiwo munyika yose ari kuramba achitsvaga vadzidzisi vakarongeka vakavimbika kuti vabatane neboka ravo. Ive iyo isina wire system maitiro ekugadzirisa, svondo rekuchengetedza kana deta centre, mutungamiri, zvikamu zvebasa zvakapararira zvinopa sarudzo yakawanda yekuita. Basa rinogona kuita uye kukurudzirwa kwevhangeri rakapiwa a CiscoCCNA Certification inonyatsokodzera nguva yakashandiswa pakuzvigadzirira kuti uongorore.
Chii Chitsva muCisco's Data Center - CCNA Data Center
Zvinyorwa zvepamusoro zve 10 Cloud zve 2018